Nasaina Nandoa Onitra Tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah 17 i Armenia
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Chichewa Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Holandey Hongroà Ibo Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Tsonga Xhosa Zoloa Éwé
3 DESAMBRA 2012
NAMOAKA didy nanameloka ny fitondrana any Armenia ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona any Strasbourg, Frantsa, tamin’ny 27 Novambra 2012. Tsy nohajainy mantsy ny zon’ny olona 17 izay nanda tsy hanao raharaha miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Nasaina nandoa 112 000 euros (336 000 000 ariary eo ho eo) i Armenia mba ho onitra sy ho fanonerana izay lany teny amin’ny fitsarana.
Nanao fanompoana sivily ho solon’ny raharaha miaramila ireo tovolahy Vavolombelon’i Jehovah 17 ireo, tamin’ny 2005. Fantany anefa tatỳ aoriana fa ny tafika no nanara-maso sy niandraikitra an’izany, ka tsy neken’ny sainy ny hanohy an’ilay izy ary niala izy ireo. Nosamborina sy nakarina fitsarana àry izy ireo. Nampidirina am-ponja vonjimaika nandritra ny volana maromaro ny sasany. Voasazy higadra roa na telo taona ny 11 tamin’izy ireo, taorian’izay.
Nilaza ny Fitsarana Eoropeanina fa tsy ara-dalàna ireny fampakarana fitsarana sy fanagadrana ireny, satria tsy nisy lalàna nilaza tany Armenia tamin’ny 2005 hoe voarara ny miala amin’ny fanompoana sivily. Nambaran’ilay Fitsarana koa fa tsy nohajain’i Armenia ny Andininy Faha-5 amin’ny Fifanarahana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona, izay milaza fa manana zo hanana fahalalahana sy ho voaro ny olona. Marina fa nofoanan’ny fitondrana any Armenia ny fitoriana an’ireo Vavolombelona 17. Tsy nety nandoa onitra anefa izy ireo noho ny nampakarany fitsarana sy nanagadrany an’ireo Vavolombelona. Namoaka didy àry ny Fitsarana Eoropeanina fa tsy maintsy mandoa vola i Armenia, mba hanonerana an’izay lanin’ireo Vavolombelona teny amin’ny fitsarana sy hanonerana ny fahavoazana nihatra tamin’izy ireo teo amin’ny lafiny ara-tsaina sy ara-pihetseham-po.
Nisy didim-pitsarana telo navoakan’ny Fitsarana Eoropeanina, taloha kelin’izay, nanameloka an’i Armenia. Tamin’ireo raharaha telo ireo sy ity farany ity, dia nampijalin’ny manam-pahefana tao Armenia ireo Vavolombelon’i Jehovah, izay nanda tsy hanao raharaha miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Nanao ny tsy rariny tamin’izy ireo koa ny manam-pahefana, ka nitondra azy ireo toy ny mpanao heloka bevava mampidi-doza.
Hoy i André Carbonneau, mpisolovavan’ireo Vavolombelona: “Manonitra ny tsy rariny natao tamin’ireo Vavolombelon’i Jehovah ireo ilay didy navoakan’ny Fitsarana Eoropeanina. Ireny fandresena nisesisesy ireny, dia mampita hafatra mazava amin’ireo firenena hafa anisan’ny Filan-kevitra Eoropeanina sy ny firenena toa an’i Érythrée sy Korea Atsimo ary ireo tany any Azia Afovoany, fa manan-jo handa tsy hanao raharaha miaramila ny Vavolombelon’i Jehovah.”